युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? डा. अनुपमा शर्माको टिप्स ! (भिडियो सहित) - हिपमत
युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? डा. अनुपमा शर्माको टिप्स ! (भिडियो सहित)
पुरुषको तुलनामा महिलाको अं’ग अलिक संवे’दनशिल हुन्छ । त्यसैले यसको सरसफाई र उचित स्याहार भएन भने अनेकन स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छन् ।नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्ने गछौँ, तर, नुहाउदाँ त बाहिरी सफाइसँगै मात्र हुन्छ । त्यसैले ट्वाइलेट गएपछि अनिर्वायरुपमा यौन अंगको सरसफाइ गर्नुपर्छ । धेरै जसो किशोरी, युवती र महिलालाई यो पनि थाहा हुँदैन कि यौ’नांगको सफाइ पनि गर्नुपर्छ भनेर । धेरैले यस विषयमा लाज मानेर हो या थाहा नपाएर यस बारे धेरैले चासो राख्नैनन् ।
त्यसैले सधै प्रत्येक पल्ट ट्वाइलेट गएर पि’साब वा दि’सा गरेर धोएपछि सफा कपडा वा टिस्यु पेपरले पुछेर सुक्खा बनाएपछि मात्र भित्री ब’स्त्र लगाऊनुपर्छ । धेरै जसो स्वास्थ्यकर्मीले प्र’जनन स्वास्थ्यका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छाैँ तर उमेर परिवारमा समेत यस बारेमा कुरा गर्न लाज मान्छाैँ ।त्यसैले यस विषयमा स्त्रिरोग विशेषज्ञ डा। अनुपमा शर्मासँग विशेष कुराकानीको=भिडियो हेर्नुहोस्